China Wood Mihodina Single Axis Iray Spindle Lathe Machine ho an'ny tsanganana tohatra Mpanamboatra sy mpamatsy |fara tampon'ny
Masinina lathe-spindle iray ho an'ny tsanganana tohatra
APEX Cnc hazo mamadika lathe milina afovoan'ny roa axis efatra antsy
APEX Brand cnc lathe hazo manana modely isan-karazany, toy ny APEX15016, APEX15030, APEX20030, APEX30030etc.ny habe azo namboarina, manolotra 2 taona fiantohana, ny fiainana manontolo fanohanana ara-teknika.
Wood Mihodina Single Axis One Spindle Lathe Machine ho an'ny tsanganana tohatra, ny 4 axis ATC CNClathe hazodia ampiasaina betsaka amin'ny fihodinana 3D sy fanaovana sokitra tsanganana romana, tongotra latabatra, tongotra sofa, ramanavy baseball, lovia hazo, vazy, sns.
ATC CNC lathe lathe Features
1. Ny lathe hazo dia mampiasa rafitra DSP mandroso amin'ny fifandraisana USB, miasa amin'ny tahony, miasa mety.
2. Ny milina lathe manontolo dia welded amin'ny seamless rafitra vy, izay ambony mari-pana annealing sy vibrating adin-tsaina fanamaivanana, ka ny lathe milina vatana dia miorina tsara ary tsy ho deformed mandrakizay.
3. Ny lathe vita amin'ny hazo ATC CNC dia mampiasa motera stepper marika ambony ao an-toerana mba hahazoana antoka tsara.
4. Ny rafitra miasa dia manana interface tsara fiasa mora, soso-kevitra amin'ny teny anglisy ary fomba fiasa tsotra.
5. Spindle System dia mizara ho tokana axial sy biaxial.
6. Ny rafitra fandefasana dia mampiasa lalamby efamira Hiwin sy visy baolina mba hifehezana tsara ny fahadisoana amin'ny tsipika.
7. Toerana fitaovana indray mandeha mba hamita ny workpiece manontolo.
8. Mifanaraka amin'ny rindrambaiko famolavolana CAD/CAM maro toy ny Type3, Artcam, sns.
9. Ny lathe hazo ATC dia afaka miasa tanteraka ivelan'ny aterineto ary tsy maka loharanon-karena amin'ny solosaina.
10. axis faha-4 ho an'ny sary sokitra 3D sy ny fanapahana.
11. rafitra fanovana fitaovana mandeha ho azy.
Ny ATC CNC lathe hazo misy fitaovana mandeha ho azy changer rafitra dia ampiasaina amin'ny tsanganana romanina, hazo tahony, baseball ramanavy, tohatra newel lahatsoratra, tohatra, tohatra balusters, faran'ny latabatra tongotra, fisakafoana tongotra latabatra, sofa tongotra latabatra, seza tongotra, bar seza seza, andrin-tsandry seza, fanenjanana seza, lalamby fandriana, tongotry ny bun, andrin-jiro sy ny sisa.
Parameter ara-teknika ATC CNC Wood Lathe
ampela 3.5KW rivotra mangatsiaka spindle miaraka amin'ny maotera
Isan'ny axe Axe tokana, lelany roa
Rafitra fanaraha-maso Panel controller
Varotra mafana 6090 Desktop CNC Router Machine
50 Watt Fiber Laser Metal marika milina ho an'ny ...
Online Flying Laser Marking Machine amin'ny Fiber ...
4 Axis CNC vato sokitra milina ho fanodinana ...
Fibre Laser Cutting Machine ho an'ny takelaka metaly, Tu...